कर्मचारीको चुनावमा मुख्य नेताकै हार ! « Pahilo News
कर्मचारीको चुनावमा मुख्य नेताकै हार !
प्रकाशित मिति :7June, 2016 3:05 pm
२५ जेठ । निजामति कर्मचारीहरुको जेठ १९ गते सम्पन्न निर्वाचनको परिणामअनुसार ट्रेड युनियनहरुलाई आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको नामावली पठाइदिन प्रमुख निर्वाचन अधिकृत गीताप्रसाद तिमिल्सिनाले सोमबार पत्र पठाएका छन् । ट्रेड युनियनहरुले प्राप्त गरेको मतका आधारमा पाउने पदहरुमा प्रतिनिधि पठाइदिन निर्वाचन कार्यालयले पत्र पठाएपछि संगठनहरु नेतृत्व चयनमा जुटेका छन् । कर्मचारी संगठनहरुलाई आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वका लागि नामावली पठाउन निकै सकस पर्ने संकेत देखिएको छ ।
यसैक्रममा ट्रेड युनियन निर्वाचनमा मूल नेतृत्व गरेका संगठनका नेताहरुले आफ्नै जिल्ला वा आफू कार्यरत मन्त्रालय वा विभागमा आफ्नो संगठनलाई जिताउन नसकेको तथ्य खुलेको छ । एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल गृहमन्त्रालयमा २० बर्षदेखि कार्यरत छन् । तर, संगठन जताततै पहिलो शक्तिका रुपमा जितिरहदा गृहमन्त्रालयमा भने दोस्रोे भएको छ । मन्त्रालय र संवैधानिक निकायसमेत ४२ वटा विभागीय समितिमध्ये ३० वटामा पहिलो शक्तिका रुपमा जित हासिल गरेको संगठन गृहमन्त्रालयमा दोस्रो हुनुले उनी लोकप्रिय नभएको संकेत गरेको छ ।
ढकालमात्र होइन, गृहमा संगठनका पदाधिकारीसमेत गरी आधा दर्जन नेता कार्यरत छन् । संगठनका सचिव रामहरि शर्मा गृहकै रैथाने हुन् । संगठनका महिला सचिव भवानी दाहाल पनि गृहमै कार्यरत छिन् । केन्द्रीय सदस्यहरु कृष्ण ढकाल, गोमा कटवाल पनि गृहकै हुन् । पूर्व केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र विश्वकर्मा पनि गृहमै कार्यरत छन् ।
संगठनले आधिकारिक ट्रेड युनियनमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षसहित ८ सदस्य पद पाएको छ ।
महासचिवसहित ७ सदस्य पाएको नेपाली कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियन संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार देवकोटा महोत्तरीका हुन् । तर उनले आफ्नै जिल्लाबाट युनियन संघलाई टे«ड युनियन चुनावमा पहिलो शक्तिका रुपमा जिताउन सकेनन् । महोत्तरीमा मधेशी निजामती कर्मचारी मंच पहिलो शक्तिका रुपमा बिजयी भएको छ ।
त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्र समर्थक राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका अध्यक्ष हरि रावलले आफू कार्यरत श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र आफ्नो गृहजिल्ला जुम्ला दुवै ठाउमा आफ्नो संगठनलाई पहिलो बनाउन सकेनन् । हुम्ला र मुगुमा युनियन संघलाई समर्थन गरेर रावलले जुम्लामा राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनलाई जिताउने कसरत गरे पनि १ भोटले निजामती कर्मचारी संगठनसँग पराजय बेहोर्नुपरेको थियो । श्रम मन्त्रालयमा युनियन संघ पहिलो भएको छ ।
मधेशी निजामती कर्मचारी मंचमा त ७ जना पदाधिकारी वन मन्त्रालयकै छन् । अध्यक्ष विनोद सिंह, महासचिव बेचनकुमार महतो समेत ७ जना पदाधिकारी वनकै छन् । तर वन मन्त्रालयमा मञ्चको जमानात नै बचेन ।